आफ्नै पिसाब बेचेर लाखौँ कमाउँदै यी युवती – Palpa Samachar
काठमाडौं । भनिन्छ, भाग्य हुनेका लागि तालुमा आलु फल्छ । अर्कोतर्फ पैसा कमाउने काम एउटा कला पनि रहेछ । त्यो कला जो कोहीलाई कहाँ आउँछ र ?
जब भाग्यले साथ दिन्छ र मानिसले आफ्नो कलाको आइडिया लाउँछ तब मनग्गे पैसा कमाउन कुनै पहरो फोर्नु पर्ने रहेनछ । यो दुनियामा आफ्नै पिसाब बेचेर पनि मानिसहरु करोडपति बन्ने रहेछन् ।
अमेरिकाको फ्लोरिडामा एक युवती आफ्नो पिसाब बेचेर घरमै बसीबसी लाखौँ कमाउँथिन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । जब मानिसहरुलाई ती युवतीको त्यो कर्मको बारेमा थाहा भयो तब सबै अचम्ममा परे । आखिर उनको पिसाबमा त्यस्तो के छ ? जसलाई किन्नका लागि मानिसहरु बेचैन हुन्छन् ?
घटना अनुसार एकजना कलेज पढ्ने युवतीले दुई वर्ष पहिले अनलाइनमा एक विज्ञापन दिइन् आफ्नो पिसाब बिक्रि समबन्धमा । आफु ३ महिनाको गर्भवती रहेको हुँदा प्रेग्नेन्सी परीक्षणका साथै पिसाबलाई कुनै विशेष काममा प्रयोग गर्न चाहनेले आफ्नो पिसाब खरीद गर्न सक्ने कुरा उनले विज्ञापनमा उल्लेख गरेकी थिइन् । उनले आफ्नो पिसाबको एक वा दुई थोपाको मूल्य २५ डलर पर्ने बताएकी थिइन् ।
सोसल मिडियामा उनको विज्ञापन भाइरल बन्यो । पिसाब किन्न चाहनेको होडबाजी नै भयो । रोचक त के भने उनको पिसाब किन्न चाहनेमा धेरै जसो महिला तथा युवतीहरु नै थिए । यसरी ती युवतीले आफ्नो पिसाब बेचेरै दिनमा २ सय डलर कमाउन थालिन् ।
आखिर उनको त्यो पिसाब किन्नका लागि महिलाहरु किन मरिहत्ते गरे त ? यसको पनि रोचक नै रहेछ कारण रहेछ । खासगरी ती गर्भवती युवतीको पिसाबलाई अन्य युवतीले आफ्नो ब्वायप|mेण्डलाई ब्लाकमेल गर्नमा प्रयोग गर्दा रहेछन् । बिहे गर्ने बचन दिएर यौन सम्पर्क गर्ने तर पछि बिहे नगर्ने भनेर तर्किने प्रेमीहरुलाई आफु गर्भवती भैसकेको भनेर तर्साउनका लागि उनीहरुले किनेको पिसाबबाट प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरी पोजिटिभ रिजल्ट प्रेमीहरुलाई देखाउने रहेछन् ।
तर उनको त्यो पिसाब किन्नेहरुले त्यसलाई के के मा प्रयोग गर्थे भन्ने उनलाई थाहा थिएन । पिसाब बेचेर उनले लाखौँ कमाइन् र आफ्नो कलेजको शुल्क तिर्नका लागि त्यो पैसा प्रयोग गरेको उनी बताउँथिन् ।
एक समाचार च्यानलले स्टिङ्ग अपरेसन गरी त्यो पिसाब बिक्रिको यथार्थ कथा बाहिर ल्याइदियो । पत्रकार ग्राहक बनेर ती युवतीसम्म पुगे । त्यतिबेला उनले पिसाब बेचेर दिनमै २० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम कमाउँथिन् । तर जब सञ्चार माध्यममा समाचार आयो तब विज्ञापन साइटले पिसाब बिक्रिको त्यो विज्ञापन हटाएको थियो । अनि पिसाब बेच्ने ती युवतीको धन्दा पनि बन्द भएको थियो ।
– एजेन्सीको सहयोगमा onlinekhabar.com
महिला विश्वकप क्रिकेटः उपाधि अष्ट्रेलियालाई, इंग्ल्यान्ड ८ विकेटले पराजित